list-layout – Nay Chi & Lamin Myanmar Real Estate
TO GET YOUR HAPPY HOME, JUST CONTACT "NAYCHI & LAMIN"
Codo for rent
States & Division
2 Floor, သမိုင်း။ ရန်ကုန်။ Lakhs 290.00
2 Floor, သမိုင်း။ ရန်ကုန်။
တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ သမိုင်းမြို့သစ်ဘူတာ၊ ဗဟိုလမ်း၊ စျေးတို့နှင့်နီးပါသည်။ ဘုရင့်နောင်စျေးနှင့်နီးပါသည်။ အကျယ်အဝန်း – (12.5*52) ft, အလွှာ-2Floor Hall type 1 aircon , ဝရံတာကြွေပြားခင်း၊ ပြတင်းပေါက်အားလုံးသံပန်းတပ်ဆင်ပြီး၊ ပါကေးခင်း၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ ၊ ပြင်ဆင်ပြီး။ ခြေရင်းတွင်တိုက်အမြင့်မရှိပါ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းပါသည်။ 290 သိန်း (ညှိနှိုင်း) အခန်းကြည့်ရှု့လိုပါက ၃ နာရီခန့် ကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်သွယ်ရန်။ နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: […]
625 sq ft 1 bed 1 bath
ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့။ ရန်ကုန်။ Lakhs 600.00
ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့။ ရန်ကုန်။
လုံးချင်း အိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ရောင်းမည်။ ခုအချိန် မိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေ မဆုံးရုံးရအောင်၊ မပျောက်ပျက်ရအောင်၊သာမက တိုးတက်ကြီးပွားအောင်အကြံပြုပါဆိုရင် နောင်ရေးလည်း စိတ်အေးရမယ့် ဈေးတန် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့ လုံးချင်းတစ်ထပ်တိုက်လေး တစ်လုံးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ခြံအကျယ် အလျား ၆၀ ပေ၊ အနံ ၄၀ ပေ။ ဘိုးဘပိုင်မြေအမျိုးအစား( ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာသည် ) အိမ်အကျယ် (၂၀) ပေ၊ (၄၀) ပေ၊ RC တစ်ထပ်တိုက်၊ အရှေ့/တောင် မျက်နှာနှစ်ဖက်ဖွင့် ထောင့်အကွက်။ (၂)ယောက်အိပ်(၂)ခန်း၊ (၁)ယောက်အိပ်(၁)ခန်း၊ ရေ/မီး အစုံ၊ ခြံအပြည့် ကြွေပြားခင်း၊ အိမ်အတွင်း Venyl အပြည့်ခင်း၊ ဘုရားစင် ရှယ်၊ သံပန်း အုတ်တံတိုင်းခတ်၊ ဘလိပ်ဆူးများ အပြည့်ကာရံထား။ ဘိုးဘပိုင်မြေ၊ အထောက်အထား အပြည့်အစုံရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာသည်။ […]
2400 sq ft3beds2baths
ဝေဘာဂီ။ မြောက်ဥက္ကလာ။ ရန်ကုန်။ Lakhs 1,100.00
ဝေဘာဂီ။ မြောက်ဥက္ကလာ။ ရန်ကုန်။
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ ခြံအကျယ် ၃၈ ×၅၀ ‘ (ပုံမှန်ဂရန်အကွက်က 30/50) ကန်ထရိုက်တိုက် 16/50 (ဘေး 1ပေစီထားလှေကား 4ပေ ရင်ကွဲ) တိုက်ခန်း 4ထပ်ခွဲ ဒါဘာအပါ ဆောက်လို့လည်းရ လက်ရှိအိမ် အလျား ၁၉ အနံ ၃၈ ပေ အုတ်ခံ ပျဉ်ထောင် တအိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြီး အရှုပ်အရှင်းကင်း ပါမစ်မြေတဦးထဲပိုင် ရေမီးစုံ (ဂျိုးဖြူရေ)စျေးနီး ကားနီး ဘူတာနီး ကျောင်းနီး အငှားထား ၂သိန်းခွဲရ သိန်း 1100 အနည်းငယ်အလျော့အတင်းရှိပါတယ်။ Online banking မရပါ4ရပ်ကွက် ရွှေလီလမ်း ဝေဘာဂီ မြောက်ဥက္ကလာ အိမ်ကြည့်ရှု့လိုပါက တစ်ရက်ကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို […]
1900 sq ft 1 bed 1 bath
သမိုင်း (1)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း/ ရန်ကုန်။ Lakhs 2,500.00
သမိုင်း (1)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း/ ရန်ကုန်။
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ သမိုင်း (1)ရပ်ကွက်၊ မြို့ဟောင်း(3)လမ်း၊ ဂရမ်မူရင်းအမည်ပေါက်။ အရှုပ်ရှင်းကင်း၊ လမ်းကျယ်၊ နေရာကောင်း။ #အကျယ်အဝန်း ပေ၂၅xပေ ၅၀ နှင့် နှစ်ထပ်, အုတ်ညှပ် BN(အပေါ်လျှာထိုးခင်း) ရေ(အဝီစိ) မီးစုံ #ဈေးနှုန်း သိန်း 2500 အိမ်ကြည့်ရှု့လိုပါက တစ်ရက်ကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ #ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ 09794390261, 09795727121 viber: 09443139801 www.myanmar-realestate.com
1250 sq ft2beds 1 bath
6 ရပ်ကွက် တောင်ဥက္ကလာ။ ရန်ကုန်။ Lakhs 2,500.00
6 ရပ်ကွက် တောင်ဥက္ကလာ။ ရန်ကုန်။
Mini Condo တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။6ရပ်ကွက် တောင်ဥက္ကလာ။ ဝေဇယန္တာလမ်းဒဲ့ပေါက်။ 34*56 ပေ၊ (1904 sqft) ပထမထပ်2MBR (hot & cold shower) 1 Single room4aircons ကြွေပြားအပြည့်ခင်းထားသည်၊ ပါကေးခင်းပြီး။ ပြတင်းပေါက်အားလုံး သံပန်း၊ ခြင်ဇကာ၊ ဆန်းရှိတ်တပ်ဆင်ပြီး။ မီးဖိုခန်း ဘေစင်နှင့် မီးဖိုခုံကို ဂရက်နိုက်ခင်းထားသည်။ ဘေစင်အောက် မီးဖိုခုံအောက် ပစ္စည်းထည့်ခန်းတံခါးများတပ်ဆင်ပြီး။ 160 KVA ကိုယ်ပိုင် ထရန်စဖော်မာပါသည်။ အခန်းတွင်မီးမြှင့်စက်သုံးရန်မလိုပါ။ ၈ ယောက်စီး ဓာတ်လှေကားပါသည်။ဓာတ်လှေကားအတွက် 40 KVA မီးစက်ပါသည်။ ရေတင်ရန် 1HP ရေမော်တာ +1000 လီတာဆန့်စတီးရေတိုင်ကီပါသည်။ 2500 Lakhs အခန်းကြည့်ရှု့လိုပါက […]
1904 sq ft3beds2baths
ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်။ ရန်ကုန်။ Lakhs 520.00
ပေအကျယ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ အောင်သပြေလမ်း / ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်။ မျက်နှာဝ ၁၉ပေ အရှေ့အနောက်၅၅ပေ ၆လွှာ 19*55 ပေ၊2BR4aircons ကြွေပြားအပြည့်ခင်းထားသည်၊ ပါကေးခင်းပြီး။ ပြတင်းပေါက်အားလုံး သံပန်း၊ ခြင်ဇကာ၊ ဆန်းရှိတ်တပ်ဆင်ပြီး။ ဘေစင်အောက် မီးဖိုခုံအောက် ပစ္စည်းထည့်ခန်းတံခါးများတပ်ဆင်ပြီး။ ထပ်ခိုးတစ်ဝက်ပါရှိပြီး ကျွန်းတံခါး ကျွန်းပါကေးဖြင့်အခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ သိန်း 520 ညှိနိင်း အခန်းကြည့်ရှု့လိုပါက ၃ နာရီခန့် ကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ Ph: 09 793158939, 09 795727121 […]
1045 sq ft2beds 1 bath
အရှေ့ကြို့ကုန်း။ ရန်ကုန်။ Lakhs 8,500.00
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ အရှေ့ကြို့ကုန်း၊ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်။ အကျယ် -၇၅ ပေပတ်လည် အာစီအိမ်သေးတစ်လုံးပါ။ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်၊ ၁၄ ပေ ၆ စီးအနည်းလေးထားရ၊ စျေးနီး ကျောင်းနီး၊ ဂရံအမည်ပေါက် စာရွက်စာတမ်း အပြည့်ရှိ လမ်းကျယ်၊ အရှုပ်ရှင်းကင်း။ ၈၅၀၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း) အိမ်ကြည့်ရှု့လိုပါက တစ်ရက်ကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ #ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ 09794390261, 09795727121 viber: 09443139801 www.myanmar-realestate.com
5625 sq ft
ဒဂုံမြောက် / 30 ရပ်ကွက် Lakhs 1,300.00
ဒဂုံမြောက် / 30 ရပ်ကွက်
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ ဒဂုံမြောက် 30 ရပ်ကွက်ထွန်းသီရိ6လမ်း။ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း တည့်ပေါက်။ ကျောင်းလမ်းဈေး မူလတန်းကျောင်းနဲ့နီး 23 x 60ပေ အကျယ်။ ဂရံမူရင်းခြမ်း အမည်ပေါက် မိသားစုမှ ကျမ်းကျိန်ပေးမည်။ အရှုပ်အရှင်းကင်း 100% အိမ်အဟောင်းပါ။ လက်ရှိ အိမ်ပိတ်ထား။ အိမ်ငှားမရှိ။ မီးပါ။ ရေမပါ။ သိန်း 1300 ညှိနှိုင်း။ cash only Banking ညှိနှိုင်း။ အိမ်ကြည့်ရှု့လိုပါက တစ်ရက်ကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ #ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ 09794390261, 09795727121 viber: […]
1380 sq ft 1 bed
18*52 ပေ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း။ ရန်ကုန်။ Lakhs 1,350.00
18*52 ပေ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း။ ရန်ကုန်။
Mini Condo လိုအကျယ်အဝန်းနှင့် ပေအကျယ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ 18*52 ပေ၊ မြေညီ ကြွေပြားအပြည့်ခင်းထားသည်၊ modern furniture များဖြင့် အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး သွပ်ဝိုင်းကြီးရပ်ကွက် ကျောက်စိမ်းလမ်း သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ သွားဆေးအနီး 1350 Lakhs အခန်းကြည့်ရှု့လိုပါက ၃ နာရီခန့် ကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801 www.myanmar-realestate.com
936 sq ft2beds2baths
ခြံကျယ်ရောင်းမည်။ အင်းစိန်။ Lakhs 4,500.00
အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်သောရပ်ကွက်ရှိ ခြံကျယ်ရောင်းမည်။ အင်းစိန် မင်းကြီးလမ်းသွယ် အောင်သပြေလမ်း တွင် 43/80 ခြံ ကျယ် အကျယ်ဝန်း- 43*80 ပေ ဘိုးဘပိုင်မြေ၊ 4500 Lakhs (nego) လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801 www.myanmar-realestate.com
မြေညီရောင်းမည် သံလမ်း။ ရန်ကုန်။ Lakhs 470.00
မြေညီရောင်းမည် သံလမ်း။ ရန်ကုန်။
္ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစည်ကားဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ လှိုင်မြို့နယ် သံလမ်း ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်းမြေညီထပ်လေး ရောင်းမည် တိုက်ခန်းအကျယ် 12 ပေခွဲ 55 ပေ စျေးနူန်း 470 သိန်း (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဘက်လှည့် သံပန်းဆန်းရှိတ်များတပ်ဆင်ထားပါသည် ခန်းဆီး လိုက်ကာ ဆိုဖာဆက်တီ တစုံနှင့် အဝတ်ဘီဒိုများကိုလဲ လက်ဆောင်ထဲ့ပေးထား ပါသည် တအိမ်လုံးပါကေးခင်းပါသည် အိမ်ရှေ့ဝင် ပေါက် မီးဖိုခန်း အိမ်သာ ရေချိုးခန်း ကြွေပြား အပြည့်ခင်းထားပါသည် နောက်ဘက်မြေပိုတွင် အခန်းတခန်းထပ်ဖွဲ့ထား ပါသည် အသင့်တက်နေရုံအခန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါက အခန်းကြည့်ရှု့လိုပါက ၃ နာရီခန့် ကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း […]
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံနှင့်ကပ်လျှက်။ ရန်ကုန်။ Lakhs 650.00
အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်။ ဘုရင့်နောင်တံတားအဆင်း လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံနှင့်ကပ်လျှက်တွင်ရှိသောရပ်ကွက်။ ဘုရင့်နောင်တံတားဘက်အဆင်း လှိုင်သာယာဒိုင်စုရပ်ကွက် ပန်းလှိုင်အိမ်ယာအနီး ပေ 20×60(RC) ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာအရှုပ်ရှင်းကင်းတဲ့ နှစ် 60 ဂရံအမည်ပေါက်နဲ့ ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေရုံ ထပ်ခိုးပါပြီး သုံးထပ်စာဖောင်ဒေးရှင်း ချထားလို့ သုံးထပ်ဆောက်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက်လည်းအဆင်ပြေတဲ့အိမ်လေးရောင်းမယ်ရှင့်။ အောက်ထပ်လူနေဆိုင်ခန်းဖွင့်ပြီး အပေါ်ထပ် အခန်းဖွဲ့ငှားစားရင်လည်း စက်မှု့ဇုန်နဲ့နီးလို့ ချက်ချင်းလူပြည့်ပါတယ်ရှင့် လမ်းကျယ် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်နေရာကောင်းလေးကို သိန်း 650 (ညှိနှိုင်း) အိမ်ကြည့်ရှု့လိုပါက တစ်ရက်ကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 […]
1200 sq ft2beds 1 bath
Real Estate Companies/Agents
Curtain & Wallpaper
Myanmar Real Estate Services
Nay Chi & La Min Real Estate provides the best Myanmar real estate services with very experienced consultants and lawers. Myanmar real estate services offer and help customers to sell, buy and rent rooms, condos, apartments, houses, office, shops, land, warehouse, industrial zones in mainly Yangon city area and also in other cities.Please do not hesitate to contact Naychi & lamin,Myanmar real estate
Hotel Sell / Rent
No. 741, Ground Floor, 3rd Street, 1st Ward, Mayangone, Yangon, Myanmar.
Viber : (+959)443139801
Email : naylasale2@gmail.com
Web : https://myanmar-realestate.com/
© 2020~2021 Nay Chi & La Min Real Estate. All Right Reserved .